စနေရော၊တနင်္ဂနွေပါ တော်တော်အလုပ်ရှုပ်သွားတယ်။စနေနေ့ ကပစ္စည်းတွေ လိုက်ဝယ်တာ သားအမိ
နှစ်ယောက် NTUC ကို လေး ၊ငါး ခေါက်ပဲ။ဒီနေ့ မနက်အစောကြီး ကန်တော့တယ် ပြီး စားကြတယ်။
ဒါလေးက ၀က်သားတုပ်ထိုး နဲ့ အချဉ်၇ည်။
ဒါက ကော်ပြန့်ကြော်ဖို့ လိပ်ထားတာ။စားခါနီးမှ ကြော်ပေးမယ်နော်။ပျော့သွားမှာစိုးလို့။မကြော်ပဲစားရင်
ဟော့ပေါ့အတွက်ပြင်ထားတဲ့ အသီးအရွက် ဗန်း နဲ့ ငုံးဥ၊ဖက်ထုပ်၊အသားလုံပန်းကန်။
ပြီးရင် အပေါ် က အရွက်တွေ ကို ကြိုက်ရာ ဒီ ဟော့ပေါ့အိုးထဲ
တူ နဲ့ ဇွန်း ကဒီမှာ
ပြီးရင် ဂျယ်လီလေးစားပြီးလိမ္မော်ရည် သောက်နော်။
မောင်လေးတွေ၊ညီမလေးတွေ အတွက် အန်ပေါင်းကဒီမှာနော်။
အားလုံး Gong Xi Fa Cai ပါနော်။
Posted by JuneOne at 9:20 PM
khin oo may January 25, 2009 at 10:04 PM
juneone January 25, 2009 at 10:17 PM
jia jia January 25, 2009 at 10:30 PM
happy chinese new year! i eat all ur foods.very delicious. an pong pay mar la ?
JuneOne January 25, 2009 at 10:35 PM
JuneOne January 25, 2009 at 10:37 PM
sin dan lar January 25, 2009 at 10:39 PM
သြော်.. သူများ သားသမီးတွေ ဘာဆေးတွေစားပြီး
အန်ပေါင်းက မမတွေကိုပေးလည်းရတယ်မဟုတ်လား... ငှင်
jia jia January 25, 2009 at 10:42 PM
hi an poun pay mar la lo . ma ti tha lo nay nay the . i m angry. :(
JuneOne January 25, 2009 at 10:43 PM
take from my blog
Annpi January 25, 2009 at 10:58 PM
၀က်သားတုတ်ထိုး.. ချိုချဉ်ကြော်.. စားချင်တယ်... စားချင်တယ်.... အသားပေါင်း.. ဟော့ပေါ့.. စားချင်တယ်.. စားချင်တယ်...
JuneOne January 25, 2009 at 11:10 PM
၀က်သားပေါင်း ချန်ထားမယ်လေ။ကျန်တာတွေက .................
May Moe January 25, 2009 at 11:15 PM
Gong Xi Fa Cai အပြင်မှာဂယ်လာစားချင်တယ် :P
nu-san January 25, 2009 at 11:16 PM
အကုန်စားချင်တယ်.. နောက်မှ ဟင်းချက်နည်းတွေပါ ပြောပြပေးနော်.. အမတို့ ရန်ကုန်အိမ်မှာလည်းဒီနေ့ ကန်တော့ကြတယ်.. မအားလွန်းလို့ ဖုန်းတောင် မဆက်နိုင်ဘူး.. :)
မဇနိ January 26, 2009 at 1:09 AM
စားချင်တယ် စားချင်တယ် ။
ဇနိ January 26, 2009 at 2:43 AM
ThuHninSee January 26, 2009 at 5:11 AM
နိနိလက်ထဲက ငါးကြော်ကို ဗလအားကိုးနဲ့ အတင်းလုလိုက်တယ်။
ကိုနိလိုက်ပြန်လုမယ် ကြံတာတောင် မမီတော့အောင် အမြန်လစ်သွားတာ။
ဇနိ January 28, 2009 at 7:07 PM
ငှင်း ငှင်း ငှင်း
ဒိုက်ထိုး ဘယ်လီရိုက် အပြေးကျင်းထားတာ အလကားမှ မဟုတ်တာ
ဒါမျိုးဘယ်ရမလဲ... နိနိရေ ရအောင် ပြန်လုပေးမယ်
(ပြောလို့သာ ပြောတာ - ငါးကြော်က ကုန်လောက်ပြီ..)